यौ*न लाइफ रोमा*ञ्चक बनाउनुछ ? त्यसो भए यी १० उपाय अपनाउनुस् ! – Sanjal Nepal
Homeमनोरंजनयौ*न लाइफ रोमा*ञ्चक बनाउनुछ ? त्यसो भए यी १० उपाय अपनाउनुस् !
यौ*न लाइफ रोमा*ञ्चक बनाउनुछ ? त्यसो भए यी १० उपाय अपनाउनुस् !
November 27, 2020 admin मनोरंजन 8694
यौ**न हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग हो । खाना छाना र नाना जस्तै यौ**न पनि मानव जीवनको एउटा अति नै आवस्यक कुरा हो । प्रज*ननका लागि मात्रै होइन यौ**न मनोरञ्जनका लागि पनि जरुरी हुन्छ । वास्तवमा मानिस के कति खुशी र फ्रेस रहने भन्ने कुरा उसको से*क्स जीवनमा भर पर्दछ । त्यसैले यौ**न जीवनलाई रोमाञ्चक बनाउन सके आनन्द र स्वस्थ्य लाभ तथा जीवन सुखमय आनन्ददायी बनाउन सकिन्छ र तनाब बाट पनि मुक्त हुन सकिन्छ । त्यसैले आफ्नो से*क्स लाइफ रोमा*न्चक बनाउनका लागि केही महत्वपूर्ण कुराहरुमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ केही महत्वपूर्ण कुराहरु यस्ता छन् ।
सदैव आफुलाई तनावमुक्त राख्नुहोस् स् मानिसको से*क्स लाइफ लाइ असर पार्ने चिज मध्ये तनाव एक हो । तसर्थ आफुलाइ सदैव तनाव मुक्त पार्ने कोशिष गर्नुहोस । तनाव र थकान बाट मुक्तहुने धेरै ने उपायहरु छन् । जस्तै तपाई आफुुलाई मनपर्ने फिल्म हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा योग, ध्यानगर्दा पनि तनावमुक्त भइन्छ।
आफ्नो पार्टनरसँग टाढा नरहनोस,पार्टनरलाई अंगालो मार्नुहोस स् यसरी अंगालोमार्दा स्किन टु स्किन कनेक्सन हुन्छ जसले तपाईको एक्सोटिन लेवल लाई बढाउछ । यसले तपाई आफुलाई आनन्द महसुस गर्न सक्नुहुन्छ । र आफ्नो पार्टनरसँग अरु नजिक हुन मद्दत मिल्छ।
पार्टनरसँग रोमान्टिक कुरा गरेर सम्वन्धमा ताजगी ल्याउनुहोस स् जहिले पनि तपाई मौका पाउनुहुन्छ आफ्नो पार्टनरलाई फोन गर्नुहोस र रोमान्टिक कुरा गर्नुहोस । रोमान्टिक नभए तपाई आफ्नो शुरुवाती रिलेसनको बारेमा कुरागर्नुहोस।
पेटभरी खाना नखानुहोस
स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि धेरै खानाखानु राम्रो मानिदैन त्यसैले यसले तपाईको यौ**न जीवनमा पनि धेरैनै प्रभाव पार्छ । थोरै खाना खानुले तपाईलाई झनबढि फुर्तिलो महशुस गराउछ।
कहिलेकाँही सँगै बाथ लिनुस :
से*क्स लाइफ बढाउनको लागि यो पनि एउटा महत्वपुर्ण तरिका हो । बाथरुममा राम्रो परफ्यूम स्प्रे गर्नुस र सँगै नुहानुस् ।
पार्टनरलाई प्रेम स्पर्श दिनुहोस :
सबैभन्दा महत्वपुर्ण तरिका भनको प्रेम स्पर्श हो । पार्टनरको मुड मेकअप गर्न कानको पछाडी र आखाँमा किस गर्नुुस ।
यौ’न स’म्प’र्कबाट च’रम आ’नन्द लि’न चा’हाने हो ? एक पटक पढ्नुहोस ।
April 13, 2021 admin मनोरंजन 4433
यौ’नप्रति हाम्रो विकृत सोंच छ । यौ’न भन्नसाथ त्यसलाई छा’डा भनेर नाक खुम्च्या’उने प्रवृत्तिले यस सम्बन्धमा खुला बहस हुन सकि रहेको छैन । नतिजा, यौ’नकुण्ठा जस्ता मनोविकारले धेरैलाई ग्र’स्त बनाइरहेको छ । दाम्पत्य जीवनमा यौ’न
April 10, 2021 admin मनोरंजन 5328
एक युवा , जस्को ठुलो घर थियो, हाँसी खुसी परिवार थियो, सुख, सुबिधा सबै थियो, परिपक्क उमेर भएकाले चारै तिर बाट बिहेको लागि कुरा आउँछ, कुल घरानकी एक असल केटि सँग बिबाह पनि हुन्छ, तर
November 2, 2020 admin मनोरंजन 8481
आफैले रोजेको केटासित उनले बिहे गरेकी थिइन् । सबथोक ठीकठाक चलिरहेको थियो । विवाह गरेको २ वर्षमै छोरी जन्मिएपछि उनको परिवार औधी खुसी थियो । तर श्रीमान श्रीमती दुवै बेरोजगार हुँदा परिवार चलाउन समस्या भयो